Accueil » Chronique » Fanamelohana ho faty
«Zazavavikely vao ho roa taona no voaolan’ny mpifanolobodirindrina taminy, tao Amboriky Tanambao distrika Toliary I, ny 27 novambra 2020. Nentina avy hatrany teny amin’ny hôpitaly nefa dia namoy ny ainy ilay zaza» (InfoCom Seg)
Io no tratra farany, fa marobe ny habibiana voatanisa an-gazety, ombieny ombieny. Ilay vehivavy matim-bono rehefa avy naolan’andian-jiolahy tetsy Alarobia-Amboniloha ary nosesefana tapa-kazo ny fivaviany (faran’ny taona 2018); tamin’ny 2019 indray, jiolahy tokony mbola manao asa an-terivozona sy hafa vao avy nigadra no nandroba trano no sady nanolana.
Tamin’ny alarobia 10 desambra 2014, Solombavambahoaka miisa 82 (amin’ny 151) no nanatrika ny tsangan-tanana. Fantatr’izy ireo tsara ve ny zavatra nampanekena azy, sa tsangan-tanana anjambany indray, ka izy 82 samy nanaiky avokoa ny fanafoanana ny fanamelohana ho faty? Haingana dia haingana ihany koa ny sonian’ny Filohan’ny Repoblika satria ny 9 janoary 2015 dia efa nanan-kery ny lalàna 2014- 035 manafoana ny fanamelohana ho faty.
Ny vondrona eoropeana no isan’ny voalohany indrindra faly sy ravo ary nilaza mihitsy fa andro manan-tantara io andro nanafoanana ny fanamelohana ho faty io. Mpamatsy antsika vola sy fanampiana maro isan-karazany moa ny Vondrona eoropeana: «Soniavo ity, dia omenay»…
Raha tamin’ny 15 desambra 1989 no laniera teo amin’ny Fivoriamben’ny Firenena mikambana (résolution 44/128) ny «deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort», 23 taona taty aoriana, 24 septambra 2012, izay Madagasikara vao nanao sonia. Ary ny 21 septambra 2017 vao niroso tamin’ny «ratification».
Fifanarahana iraisam-pirenena mihatra aman’aina tahaka izany, dia vitavita foana antsokosoko. Tokony nampafantarina ny vahoaka fa tsy nokonokononina tany Andafy tany fotsiny. Any amin’ireny firenena tandrefana ireny mantsy, olona efa tratra am-bodi-omby, nahavanondoza, nandatsa-drà, nahafaty zaza amam-behivavy ampolony noho ny hagegana amin’ny fivavahana, mbola entina hôpitaly ho tsaboina, andrasana ho sitrana soa aman-tsara, dia kenakenaina hahazo Fitsarana ara-drariny. Te ho deraina manafintohina !
Fanolanana zazakely roa taona, fitrandrahana volamena anaty faritra voajanahary voaaro, doro-tanety isan’andro, famantsihana ny akorambibin’ny sokatra, sy ny sisa. Heloka tokony maha-tapa-doha avokoa ireo. Dia io vao nosoloina «sazy an-terivozona mandra-pahafaty» io. Ilay «asa anterivozona mandra-pahafaty» indray moa raha mba tena «an-terivozona» sady «gadralava» tahaka ny tamin’ny andro taloha, fa mbola ho avy indray ny mpiaro zon’ olombelona hitaky izatsy, hampanao sonia zaroa.
Mandra-pahafatin’izany olon-tsy-vanona izany, ahiana isan’andro ny fandosirany ny fonja. Karazan-jiolahy tahaka ireny raha vao tafaporitsaka, tsy maintsy manindroa, manintelo, mandra-pahalavony amin’ny «bala very».
Fanolanana zaza roa taona: mbola mendrika ho olona ve no hiantsoana izay mahavanona izany ? Dia mbola ho ompiana any am-ponja. Kanefa raha ny habibiana vitany, tsy misy toerana hoazy intsony anaty fiarahamonin’olombelona. Atao inona ho loza mihantona ao amponja ao rehefa tsy misy fanantenana intsony? Rehafa «mandra-pahafaty» ihany, aleo tonga dia melohina ho faty avy hatrany.
Pôle anti corruption Mahajanga – Décès subit du procureur Beberto Rakotomavo